Ka dib Harvey, iyo Irma, hadda waxaa imanaya Maria, duufaan kale | Saadaasha Shabakadda
Khariidadda dabaysha hadda jirta
Kadib marinkii burburka duufaanta Irma, Duufaan cusub ayaa u hanjabeysa Antilles-ka Yar ee Kareebiyaanka. Duufaanta Maria. Saameyntiisa ayaa la filayaa saacadaha soo socda, aaggan saamayntiisa Irma aad bay u burbureen. María, oo ahayd duufaan kulul, ayaa la xoojiyay saacadihii ugu dambeeyay illaa ay gaarto duufaanta heerka 1aad. Sidoo kale, wax waliba waxay muujinayaan taas inta lagu guda jiro Maria way sii xoogaysan doontaa, iyo markale markale ogeysiisyo Puerto Rico ah.
Wax walba waxay ku xirnaan doonaan sida ay isu beddelaan iyo haddii ay ugu dambeyn "go'aansadaan" inay beddelaan dhabbaheeda. Xilligan la joogo waxaa la filayaa inay ka tallaabi karto jasiiradda Puerto Rico, iyo inay sidaas ku marayso qayb ka sarreysa tan hadda jirta. Xilligii duufaantu wali ma dhamaan, waana sababta ay wali kuwo cusub u jiraan.
Qaylodhaanta gobolka iyo saameynta Fujiwhara
Duufaanta Maria, ayaa la saadaaliyay 72 saac gudahood
Sida laga soo xigtay Xarunta Qaranka Mareykanka ee Duufaanta, Duufaanta Maria ayaa la filayaa inay ku dhufato Jasiiradaha Leeward ee Kariibiyaanka galabnimada Isniinta. Waxay kaloo ku daraan intaas 48-da saac ee soo socota way sii sii fideysaa fuerte. Waxaa jira ogeysiisyo digniin ah oo ku yaal Guadeloupe, Dominica, Montserrat, Saint Kitts, Nevis iyo Martinique. Iyagoo tixgelinaya in qaar badan oo ka mid ah aagaggan ay u socoto ay horayba u garaacday Irma, waxay xaaladda ka dhigayaan mid sii murugsan Jasiiradaha waxaa ka mid ah kuwa Antigua iyo Barbuda, halkaasoo aagga sawirka uu ka xumaa.
Waxa kale oo jira duufaan kale oo firfircoon oo ka socota Atlantic, Hurricane José. Waqtigaan la joogo, khatar ma keeneyso, si kastaba ha noqotee, xaqiiqda ah inay jiraan laba duufaano aad u dhow ayaa sababi kara waxa loo yaqaan ' "Saamaynta Fujiwhara". Iyada oo ku xidhan tusaalaha, saadaashu waxay keeni kartaa ama u horseedi kartaa saameyntan. Si loo fahmo waxa ay ku saabsan tahay, waxay u egtahay sidii nooc ka mid ah qoob-ka-ciyaarka "qalaad" ee u dhexeeya duufaannada way isku soo dhowaadeen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ka dib Harvey, iyo Irma, hadda waxaa imanaya Maria, duufaan kale